တွေးမိတွေးရာ...... .ရေးမိရေးရာ စာများ.: October 2008
သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားစမြည် ၂
ကိုတာရဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကြိုက်လို့ ယူသုံးထားတာပါ။ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အပြင်မှာဆုံဖြစ်ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ အဝေးရောက်သူငယ်ချင်းများနဲ့ ချက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်.. ထူးထူးခြားခြားပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးများ ပြန်ပြောင်းဖတ်ချင်တဲ့အခါ ဖတ်ရအောင် သည်ထဲမှာ လာရေးထားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်ကို ရောက်လာတယ်။ အရင်က သူနဲ့ စကားတွေအများကြီးပြောနေကျ၊ အကြောင်းအရာ ပေါင်းစုံဆွေးနွေးနေကျ..။ သူကယောက်ျားလေး၊ ကိုယ်က မိန်းကလေးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်တို့ကြားမှာ ရွေးပြောရမယ့်စကား၊ ဂျန်ဒါမတူလို့ ထိန်ချန်ပြောဆိုရမယ့်အကြောင်းအရာဆိုတာမျိုး မရှိလောက်အောင် .. ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းပါပဲ။ ကဘာသတင်း၊ မြန်မာသတင်း၊ ကြီးကြီးတွေရဲ့သတင်း၊ အတင်း တွေရော.. ကုန်ဈေးနှုန်းအကြောင်း၊ ဟိုအကြောင်း၊ သည်အကြောင်း စာအုပ်တွေအကြောင်း၊ စာရေးဆရာတွေအကြောင်း၊ အချစ်အကြောင်း.. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအကြောင်း.. လူတွေအကြောင်း..စုံကလုံစိပါပဲ။ အဲသည်နေ့က ရောက်လာပြီး အားတက်သရောသတင်းထူးစပေးတယ်။ ဟဲ့.. ဦးဥာဏ်ဝင်းက ယူအန်န်မှာ တောင်းဆိုလိုက်ပြီနော် တဲ့။ ဟုတ်လား .. ဘာတဲ့တုန်း လို့ကိုယ်က ပြန်မေးတော့. နင်မသိဘူးလားတဲ့။ ဟေ့အေး.. ဘာတောင်းတာတုန်း လို့မေးတော့.. ပိတ်ထားတာတွေ ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လေ.. တဲ့။ အော်.. ဟုတ်လားပေါ့။ ငါအခုပဲ အင်တာနက်ဆိုင်က ပြန်လာတာဟ။ ဒီမှာလေ.. ဒါလေး ပရင့်ထုတ်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး သူ့ကို ကိုယ်ထုတ်လာတဲ့ စာရွက်ပြလိုက်မိတယ်။ အဲဒါဘာလဲတဲ့ … လှမ်းယူကြည့်ရင်းမေးတယ်။ တရုတ်ကထုတ်တဲ့ မယ်လ်မင်းပါတဲ့ နို့မှုန့်စာရင်း။ ဟမ်… နင်ကလဲ.. ။ ဆိုပြီး ပြန်ပေးတယ်။ (လောလောဆယ်မှာ သူက အိမ်ထောင်ကျထားပေမယ့် ကလေးမရှိသေးဘဲ.. စီးပွားရေးတွေလုပ်နေတဲ့သူ)
ငါက အခု ကလေးအမေလေ၊ ရုံးကနေ မီးဖွားခွင့်ယူထားတဲ့ အချိန်မှာ ငါ့ခေါင်းထဲမှာ ငါ့သားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ကိစ်စပဲရှိနေတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ငါ့အဖို့ အရေးအကြီးဆုံးသတင်းက အဲဒါပဲဟ.. လို့ပြောမိတော့ သူကလဲ… ပြောစရာစကားမရှိတော့သလို ငြိမ်သွားတယ်။ အရင်ကဆို.. ကိုယ်လဲ နိုင်ငံရေးတွေ၊ ကဘာ့အရေးတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဟိုကဟိုလိုဖြစ်နေတယ်နော်။ ဟိုဟာတွေက ဒီလိုဆို ဒီဟာတွေက ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်နော်… ဘာညာ သာရကာတွေပေါ့လေ…။ အခု အိမ်ထောင်ကျပြီးကလေးလေးမွေးထားတဲ့ အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုဘောင်က ကျဉ်းများသွားလေသည်လား… တွေးနေမိတယ်။ ခဏနေတော့ အမျိုးသားရုံးကပြန်ရောက်လာတော့ .. သူနဲ့ စကားဆက်ပြောလေရဲ့..။
၁၀ရက်နေ့ညက သူငယ်ချင်းက ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်။ နို့မှုန့်တွေကြေငြာပြီတဲ့။ ဒူးမက်စ်ပါတယ်တဲ့။
အစပိုင်းက ဒူးမက်စ်တိုက်ထားတော့ .. လန့်သွားတယ်။ နောက်နေ့ သတင်းစာထဲမှာကြည့်တော့မှ.. ဒူးမက်စ်က ထုတ်တဲ့ ဒူးလက် ဆိုတာသိရတယ်။ ကိုယ်တို့ တိုက်တာက မားမက်စ်၊ ဒူးလက်က သူများ လက်ဆောင်ပေးလို့ တစ်ဗူးပါသွားတာပေါ့လေ..။ ဒါတောင်သားသားအတွက် တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အမျိုးသားက လက်ရှိတိုက်နေတဲ့ Similac ကို ရအောင် ထွက်ရှာတယ်။ စီးတီးမက်ပေါင်းများစွာ သွားပြီးသကာလ ရလာတဲ့အင်ဖော်မေးရှင်းက ပစ်စည်းပြတ်သွားလို့ပါတဲ့။
ဗူးကြီးတွေ ပြတ်သွားပြီတဲ့။ ရောက်လာတဲ့ကွန်တိန်နာက တခြားနို့မှုန့်ကိစ်စတွေနဲ့ရောပြီး ထုတ်လို့မရသေးဘူးတဲ့။ ဗူးသေးလေးတွေကတော့ ဒီဇင်ဘာအိတ်စပါယာမို့ သိမ်းလိုက်တယ်တဲ့။ လိုချင်ရင် ကုမ်ပဏီမှာ လာဝယ်ပါတဲ့။ သူတို့ဟာက မယ်လမင်းမပါတာသေချာတယ်ဆိုတော့.. အမျိုးသားက ဗူးသေး ၄ဗူးပြေးဝယ်ထားလိုက်သေးတယ်။ တော်သေးတယ်။
ဒီ ၄ ဗူးကိုပဲ အမေနို့များများဖိတိုက်ပြီး ထိန်းထားရမယ်။ ရုံးပြန်မတက်ရခင်။
Posted by Maw at 3:29 AM0comments
ခြောက်လအောက် ကလေးနို့မှုန့်များ နှင့် ပတ်သတ်ရ်ျ
တရုတ်ကစလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကြောင့် နို့မှုန့်တွေ ရုတ်ရုတ် ရတ်ရတ် ဖြစ်တော့ ကိုယ်လည်း စိတ်ပူရတာပေါ့..။
မွေးစမှ ၆ လအထိ မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းကိုသာ တိုက်ရမယ် ဆိုတဲ့ ယူနိဆက်ဖ် ရဲ့ အိတ်စ်ကလူှးဆစ်ဖ် ဘရက်စ်ဖိဒင်းအရ.. ကိုယ်လည်း ကြိုးစားပမ်းစား မိခင်နို့ကိုပဲ တိုက်တာပါပဲ။ ဒါက ပထမဆုံးကလေးဖြစ်တော့ ရုတ်တရတ်ကြီး နို့က မထွက်သေးတော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဖော်မျူလာ ကူရတာပဲ။ နို့ကောင်းကောင်းထွက်လာတော့လည်း မကြာခင်ရုံးပြန်တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နို့ဗူးကျင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ အမေနို့ကို သူဆနဒရှိသလောက် အချိန်ပြည့်တိုက်ပြီး ဗူးနို့ကို အချိန်နဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ကျင့်ပေးတိုက်ပေးတောကြောင့် ကလေးနို့မှုန့် ၀ယ်သုံးတဲ့လူတွေထဲမှာ ကိုယ်တို့လည်း ပါတာပေါ့လေ..။
မွေးစမှာပဲ အမေနို့ကောင်းကောင်းမထွက်သေးတော့ ဖော်မြူလာကူရမယ် ဆိုလို့ ယောက်ျားက အပြေးအလွှားသွားဝယ်လာတယ်။ ဒူးမက်စ်က ထုတ်တဲ့ ဂိုးလ်စီးရီးစ်။ ဒါနဲ့ အဲဒါကို ပဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ..။ တရုတ်ကနို့မှုန့်ထဲ မယ်လ်မင်းဓာတ်တွေ ပါတယ်ဆိုတဲ့ပြသနာဖြစ်တော့.. ဒီနည်းကို တခြားကုမ်ပဏီတွေကလည်း သိချင်သိမယ်၊ သုံးထားချင်သုံးထားမှာပေါ့ လို့တွေးမိပြီး နို့ဗူးတိုက်ရတာ စိတ်မချမ်းသာလို့ ဗူးလျှော့ပြီး အမေနို့ကို ပိုတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့.. ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး နို့မှုန့် ဖြစ်ပြီး ကုမ်ပဏိကလည်း နံမည်ကြီးစိတ်ချရမယ်ထင်တဲ့ Abbott ကထုတ်တဲ့.. Similac infant formula Stage 1 (0-6months) ကို ပြောင်းတိုက်ပါတယ်။
ပြောင်းတိုက်ရင်းကပဲ.. ထပ်ဝယ်ဖို့ရှာတော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ မနေ့ကတော့ ယောက်ျားက စီးတီးမာတ်တွေပတ်ပြီး နို့မှုန့်ရှာတာ.. ၀-၆ တစ်မျိုး ကို ကုမ်ပဏီက လာပြန်သိမ်းသွားတယ်တဲ့။ အိတ်စ်ပိုင်ယာဖြစ်နေလို့ လို့.. ၀န်ထမ်းကောင်မလေးက ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ သည်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကမှ ၀ယ်တဲ့ အိမ်ကဗူးကို ကြည့်တော့ ၂၀၁၀ မှ အိတ်စ်ပိုင်ယာဖြစ်မှာ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့။ သိပ်မသင်္ကာတော့ဘူးလေ..။ ဒါနဲ့ ညက စိတ်မချလို့ ဗူးချိန်မှာ ဗူးမတိုက်တော့ဘဲ.. အမေနို့ပဲ တိုက်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မှ အွန်လိုင်းမှာ လိုက်ရှာကြည့်တော့.. အောက်ပါသတင်းကိုတွေ့တော့တာပဲ။
Infant (0-6 months) Milk Powder
In line with new guidelines set by Singapore Infant Foods Ethics Committee, Singapore and Abbott’s affirmation to support breastfeeding for as long as possible during infancy,we will not be making available infant formulas (meant for infants 0-6months) through Abbott’s e-store with immediate effect.
These infant formulas include Similac Infant Milk Powder, Similac Neosure Milk Powder and Isomil Milk powder.
Similac Infant Milk Powder, Similac Neosure Milk Powder and Isomil Milk powder are available at all leading supermarkets, hypermarkets and at selected pharmacies.
Please contact us at our Nurse Advisor Hotline: 62786220 should you have any further enquiries.
အီးစတိုးမှာ အရောင်းရပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ပရိုဒက်ရှင်းကိုပါ ရပ်လိုက်သလား မပြောတတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီက စတိုးဆိုင်တွေကလည်း ပြန်သိမ်းလိုက်သလား လို့ ယူဆရတော့တာပဲလေ..။ အရင် ယောက်ျားကို လှမ်းအကြောင်းကြားတော့.. ဒူးမက်စ်ကိုပဲ ပြောင်းသုံးရတော့မှာပေ့ါတဲ့။ အဲဒါကလည်း ဆက်ထုတ်ဦးမယ်ထင်ရတာပါပဲ။ မိခင်နို့ကို ၆ လအထိ တိုက်ချင်သော်ငြားလည်း အလုပ်ပြန်ဝင်ရဦးမှာ ဆိုတော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ..။ ဒီမှာဆို ကလေးတွေ နို့တိုက်ဖို့ အခန်းပေးတာ UNICEF တစ်၇ုံးပဲ၇ှိတယ်။ ဒါကလည်း သူတို့က အိတ်စ်ကူးဆစ်ဖ် ဘ၇က်စ်ဖိဒင်း အော်နေတော့ သူတို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အိတ်စကလူးဆစ်ဖ် ဘ၇က်စ်ဖိဒင်း လုပ်လို့၇အောင် ပေးထား၇တာပေါ့လေ..။ ကိုယ်တို့၇ုံး၇ဲ့ ပေါ်လစီအ၇တော့.. ၆လအောက် ကလေးငယ်ရှိတယ် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလုပ်ချိန် ၈နာရီအစား ၆ နာရီပဲ လုပ်ရင် ရပြီ။ သည်တော့ ၅ နာရီ ရုံးဆင်းမယ့်အစား ၃ နာရီ ဆင်းပေါ့။ ဒီအထိပဲ ခွင့်ပြုထားတယ်။ မနက်အစောပိုင်းလေးပဲ မိခင်နို့တိုက်ခဲ့ရတယ်။ အဲသည်တော့.. သူတုိ့လုပ်ပုံအရဆိုရင်.. ၆လအောက်ကလေးများအတွက် မထုတ်တော့ဘူး။ မရောင်းတော့ဘူးဆိုရင် တနေကုန် ကလေးကို အငတ်ထားရမလားကွယ်.. ။
WHO ရဲ့ DGမ ကြီးက ဆိုသတဲ့။
``I don't know why young women these days don't breastfeed,'' Chan said in an interview yesterday in Manila. ``We need to try our very best to tell them the difference. Of course breastfeeding is the best food for babies.''
မိခင်နို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မှန်း.. ကျုပ်လည်း သိပါ့တော်..။ working mom တွေအတွက် မစဥ်းစားကြတော့ဘူးလား။ သည် ၆ လအောက် နို့မှုန့်က အော့ပ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိသင့်တာပေါ့။ အလုပ်မလုပ်တဲ့ မိခင်များ ၆လအထိ အမေနို့တစ်မျိုးတည်းကိုသာတိုက်ပေါ့။ တိုက်ချင်လိုက်တာမှ..။ အမေနို့ချည်းပဲ။ နို့ဗူးတစ်ဗူး ၄ သောင်းနီးပါးပေးရပြီး တစ်လ ၃-၄ဗူးကုန်မယ့်ကိစ်စ ထက်.. ကိုယ့်ကထွက်တဲ့အကောင်းဆုံးနို့ရည်ကိုပဲ ကလေးကို တိုက်ချင်သပေါ့။ အလုပ်က ပြန်ဝင်ရဦးမယ့်ဟာကို။
မက်တာနတီလိဖ်ကလည်း ၃ လပဲလေ..။ သည်လိုဆို.. သူတို့က မက်တာနတီလိဖ်ကို ၆ လအထိ လို့ တိုးပေးမလား။ ကဲ...။
Posted by Maw at 3:14 AM 1 comments
အရေးမကြီးတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တချို့ကို မရမကရအောင် မလုပ်ပါနဲ့။ သူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို အချိန်ပေးပါ။ မဖြစ်လောက်တဲ့ ကိစ္စလေးကို မရမကလုပ်ရင်းနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ရရင် အချိန်ကုန်လူပန်းပြီး တစ်ခြားပိုပြီးအကျိုးရှိ တဲ့အလုပ် ပျက်တာပဲအဖတ်တင်မယ်။ တစ်ထောင်ဖိုးရအောင်လုပ်ရင်း အချိန်ကုန်မယ့်အစား တစ်သိန်းဖိုးရ အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်အချိန်နဲ့ ကိုယ့်အင်အားကို ပိုပြီးအကျိုးများမယ့်နေရာမှာ သုံးပါ။ အသေးအမွှားရပိုင်ခွင့်ကို အချိန်ကုန်ခံပြီး မရမကရအောင်လုပ်နေရင် ကိုယ့်စိတ်ထားပါ နိမ့်ကျသွားမယ်။ ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေက တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုအကြီးအကျယ် ဒေါသဖြစ်သွား စေတာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်။ နောက်မှစိတ်အေးသွားတဲ့အခါ ဒီလောက်အသေးအမွှား ကိစ္စလေးလောက်နဲ့ ဣနြေ္ဒသိက္ခာမဲ့သွား လောက်အောင် ဒေါသဖြစ်မိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့သြမိတာ၊ ရှက်တာ ကြုံဘူးမှာပါ။ အဲ့ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် သတိထားပါ။ တစ်ရာတန်လောက် ကိစ္စကြောင့် ဒေါသဖြစ်နေရင် တစ်သိန်းတန်လောက် ကိစ္စမှာလစ်ဟင်း သွားနိုင်တယ်သိပ်ပင်ပန်းလွန်းတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်မရှည်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပင်ပန်းလွန်းသွားတာမျိုး မဖြစ်အောင်စီစဉ်ပါ။ မလွဲသာ မရှောင်သာ ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံရရင် စကားများများမပြောပါနဲ့။ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကိုလည်း ပြောစရာရှိတာကို နောက်မှအေးအေးဆေးဆေး ပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မှာထားပြီး အနားယူပါ။ဘယ်သူ့ကိုမှ အလွန်အကျွံအလိုမလိုက်ပါနဲ့။ အလိုလိုက်လွန်းရင် ကြာလေပိုပြီး အလိုက်မသိလေဖြစ်တတ်တယ်။ အလိုလိုက်တာများလေ ရတာနဲ့ မကျေနပ်လေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကြာရင်မတတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာရောက် အောင် တောင်းဆိုလာမယ်။ အဲ့ဒိအခါမှာ စိတ်တိုမယ်။ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်မယ်၊ စိတ်ဆင်းရဲရမယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ရိုင်းဆိုင်းတဲ့အမူအရာ၊ အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့ အမူအရာကြောင့် ကိုယ်မှာဒေါသယမ်းအိုး မပေါက် အောင်သတိထားပါ။ (ယခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို အလေး မထားကြဘူး။ ယဉ်ကျေးတဲ့သူဖြစ်ရတာကို တန်းဖိုးထားတဲ့စိတ်၊ ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်မျိုးကို မွေးပေးရမယ်။ လူငယ်တစ် ချို့ဟာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အမူအရာမျိုးကို လုပ်ပြတဲ့ ဗီဒီယိုတို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ အတုယူမှားကြတယ်။)တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အထင်လွဲနေလို့ စိတ်ဆင်းရဲရတာ တော်တော်များပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထင်လွဲစ ရာ မဖြစ်အောင် သတိထားသင့်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထင်လွဲတာမျိုး မဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သ လောက် ကြိူတင်စဉ်းစားပြီးရှင်းထားပါ။ ပြောသင့်တာတွေကို ကြိုကြိုတင်တင်ပြောထားပါ။ သိလောက်ပါတယ် လို့တွေးပြီးမှ တစ်ဖက်က မသိလို့မလုပ်တာမျိုး ကြုံရတဲ့အခါ သိရက်နဲ့ တမင်မလုပ်ပေးတာလို့တွေးပြီး စိတ်ဆိုး မိတတ်တယ်။လူတစ်ယောက်နဲ့ လူတစ်ယောက် စရိုက်မတူဘူး။ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံမတူဘူး။ ဒါကြောင့် အခြေ အနေတစ်ခုကို မြင်ပုံခံစားပုံ အဓိပ္ပါယ် ကောက်ပုံမတူဘူး။ ကိုယ်မြင်သလို သူလည်းမြင်မယ်လို့ ပုံသေ မတွေးပါနဲ့။ ငါ မြင်သလို မမြင်ရကောင်းလားဆိုပြီး စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ရှင်းပြပါ။အလုပ်တစ်ခုကို ခိုင်းတဲ့အခါမှာ တတ်နိုင်သလောက် လိုအပ်သမျှ အချက်အလက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးပါ။ ခဏခဏ ကိုယ့်ဆီကိုလာပြီး မေးမနေရအောင် ကြိုကြိုတင်တင် ပြောပြပေးထားပါ။ ကိုယ်က ရာထူးကြီးကြီးလေလေ အောင်မြင်လေလေ ကိုယ့်ဆီက အကူအညီတောင်း မည့်သူတွေ အခွင့်အရေး တောင်းမည့်သူတွေ များလာလေပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ဒိလူတွေကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် အများကြီး ဖြစ်ရ တတ်တယ်။လူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကို မကြာမကြာတွေးပါ။ အထူးသဖြင့်လူတစ်ယောက်ကို မကျေမနပ်ဖြစ် နေရင် သူ့အကြောင်းကောင်းတာလေးတွေ တွေးဖြစ်အောင်တွေးပါ။ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြိုင်ဖက်ရှိပါတယ်။ ပြိုင်ဖက်တွေအပေါ်မှာ မနာလိုတဲ့စိတ် ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒေါသစိတ် ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြိုင်ဖက်တွေက ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်လို တွေးတတ်တယ်။ တစ်ကယ်လည်း ဒုက္ခပေးတတ် ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေချင်ရင် ပြိုင်ဖက်တွေကြောင့် စိတ်တိုရတာ ဒေါသဖြစ်ရတာနဲချင်ရင် ပြိုင်ဖက်တွေ အပေါ်မှာ သဘောထားကြီးကြီးထားပါ။ ပြိုင်ဖက်ရှိတာ ကောင်းတယ်လို့ သဘောထားပါ။ ပြိုင်ဖက်တွေကိုလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အကူအညီပေးပါ။အလုပ်လုပ်တာ ငွေရဖို့တစ်ခုတည်း အတွက်အဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ချမ်းသာဖို့၊ မိတ်ဆွေကောင်းများဖို့၊ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အကျိုးပြုဖို့၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို သုံးရဖို့၊ ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် လေးတွေလည်းပါမှ လေးနက်မယ်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်။ ကျေနပ်မှုရှိမယ်။အသွားရှိရင် အပြန်ရှိတတ်တယ်လို့ သဘောထားရမယ်။ အဲ့သလိုသဘောထားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က အသွားရှိပေမယ့် သူ့ဖက်က အပြန်မရှိတဲ့အခါ ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်။ စိတ်ပျက်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာ နည်းချင်ရင်၊ စိတ်ညစ်ရတာ၊ စိတ်ပျက်ရတာနည်းချင်ရင် အသွားရှိတိုင်း အပြန်မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ ကိုယ် တတ်နိုင်တဲ့အခါ ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ပဲ ကူညီလိုက်ပါ။
သူငယ်ချင်း နှင်းဆီနီ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူထားပါသည်။
Posted by Maw at 3:07 AM0comments
၁၀ရက်နေ့ညက သူငယ်ချင်းက ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်။ နို့မှု...